SIDA LOO KORO MASRUUFKA LAGA BILAABO ABUURKA, BEERITAANKA IYO DARYEELLIDDA "DABIICIGA SUBTROPICAL" - DHIRTA DAWOOYINKA
Kareemka Noble wuxuu ku abuuri karaa dhowr siyaabood, laakiin inta badan labbisto dhirta sii kordhaysa ee abuurka ama adoo raacaya. Doorashada ugu dambeeya waa mid la doorbidaa, maadaama ay waqti yar qaadataa, laakiin bannaanka u badan ayaa weli ku dhaqma abuurka abuurka.
Waqtiga ugu wanaagsan ee lagu beerayo shinnida xaaladaha qolka waxay noqon doontaa dhammaadka jiilaalka ama bilowga guga, laakiin haddii aad soo iibsato shinni waqti kale, waxaa fiican in aanad u isticmaalin oo dhawr bilo ah meel meel qabow ah, ka hor intaad ku shubin ciid.
Xaaladahaas oo kale, miraha caleen caleen ayaa si ammaan ah loo kaydin karaa 2-3 bilood, inkasta oo kiiskan ay adkaan doonto in la xaqiijiyo 100% biqilka.
Ma taqaanaa? Dhirta duurjoogta ah, dhirta laamuhu waxay gaari kartaa 18 mitir oo dherer ah, iyo dhexroorka jirku wuxuu u dhigmaa 40 cm (waxay soconaysaa 300-400 sano).
Laurel ee abuurka: sida loo doorto wax beerto tayo leh
Way fiicantahay haddii aad haysato fursad aad si madax-bannaan u-soo-saartid berry ama miro-soo-saarka miraha laga helo dadka la caddeeyey, laakiin inta badan waa in laga iibsadaa shisheeyaha.
Sidaa daraadeed, waxa muhiim ah maaha kaliya in la ogaado waxa abuurka laurelka u eg (ballaaran, oval, illaa 2 cm oo dherer ah, oo leh khafiif ah iyo qolof adag), laakiin sidoo kale inay tixgeliyaan noloshooda shelf (laga bilaabo wakhtiga xirmadda), gaar ahaan marka la soo gadanayo walxaha la nadiifiyey, sida miraha aan la daaweyn kaydiyaa 2-4 jeer wakhti ka dib.
By iyaga, miraha laurel iyo sidaas darteed waa mid aad u adag tahay inaad Gashi, laakiin haddii aad soo iibsato nuqullo ah in ka badan hal sano, biqilka waxay qaadan doonaa laba jeer dheer.
Waa muhiim! The seeds of laurel ku jira tiro badan oo saliidaha lagama maarmaanka ah, taas oo sabab u ah biqilka gaabis ah ee warshadda. Bilowgii ugu danbeeyay ee beerta beerta badanaa ma tixgeliyaan xaqiiqda oo waxay joojiyaan daryeellada dalagyada, ka dib markii ay ka cabanayeen guul darradii shirkadooda.
Xaaladaha cimilada ee dhalmada ee laorel
Qodobka sharafta leh wuxuu ka mid yahay dhirta hoose, waxaana taa macnaheedu yahay in ay aad u fiican tahay in ay sii kordhayso aagagga cimilada ah ee aan tilmaamayaasha heerkulku hoos udhicin -12 ... -9.5 ° C. Intaa waxaa dheer, mararka qaarkood, dhirta noocan oo kale ah waxay si wanaagsan u dulqaadan karaan miraha gaaban iyo hoos udhaca -15 ° C.
Si kastaba ha ahaatee, mid ka mid ah u hoggaansanaanta aagagga cimiladu maaha mid ku filan si loo damaanad qaado ladnaanta laaluushka goobaha geedaha kale ee beertaada. Guusha beerista waxaa sidoo kale saameeya sifooyin kale oo ka mid ah dhulka, taas oo ka sareysa, oo ay ku jiraan halabuurka ciidda iyo iftiinka.
Dabeecadda, dhurul geedku wuxuu si fiican u noolaan karaa qorraxda iyo hooska qayb ahaan, iyo sidoo kale hoos u dhaca kaymaha kaymaha qallafsan. Si kastaba ha noqotee, buuxinta caleemaha oo leh saliidaha lagama maarmaanka ah ayaa suurtagal ah oo keliya iftiinka qoraxda oo dhan xilliga guga-xagaaga.
Keliya kiiskan, dhamaadka bisha Nofeembar - bilowgii Bishii Diseembar, waxaad awoodi doontaa inaad hesho jimicsiga ugu bislaaday ujeeddooyinka culeyska ama qalabka cajiinka ah ee loogu talagalay isticmaalka daawada.
Sida loo diyaariyo dhulka lagu beeray geedkii laulle
Marka dhirta abuurka laastikada aan la iska indho tiri karin oo ka kooban hal carrada oo lagu beeray. Waxaad sidoo kale u baahan tahay inaad fahamto in heerkulka dhulka uusan aheyn in ka yar 20 ° C, sida ciidda qabow way adkaan doontaa in la gaaro biqilka abuurka sare.
Substrate nafaqo leh oo dabacsan ayaa ku habboon loogu talagalay masaajidka sii kordhaya, laakiin ma jecla carrada acidic, taas oo ah sababta ay khubarada u soo jeedinayaan in lagu daro ash alwaax ah carrada.
Ka hor inta beerashada si toos ah, isku dar ah ciidda soo socda waa la diyaarin karaa: Laba qaybood oo ah dhulka caleenta ah waa in lagu qasi karaa tiro la mid ah ciidda humus oo ku dar hal qayb oo sodan ah, iyo sidoo kale qeyb ka mid ah peat iyo ciid.
Fursad wanaagsan ayaa loo tixgeliyaa inay tahay isku dar ah qaybo siman oo caws iyo dhul caleen ah, taas oo 20% oo ciid ah lagu daro.
Substrate keentay waa kala firdhiyey dheriyo kala duwan leh dhexroor ah oo ah ugu yaraan 10 cm iyo ash yar ayaa lagu daray.
Ma taqaanaa? Waxay ogaadeen sifooyinka faa'iidada leh ee caleen caleen dhowr kun oo sano ka hor waxayna si guul ah ugu dabaqday daawada dhaqameed. Intaa waxaa sii dheer, Giriigyadii hore iyo Roomaanku waxay u adeegsadeen hantida qadiimiga ah ee geedkaan waxayna rumaysnayd in caleenta geed ay keeni karto nasiib wacan.
Diyaarinta abuurka beeritaanka
Kobcinta sharer sharaf leh oo laga soocaa abuurku waxay sidoo kale bixisaa qaar ka mid ah tallaabooyinka u diyaargarowga ah ee beereedka.
Tusaale ahaan, miraha geedkaan uma dulqaadan karo qalajinta iyo haynta biqilka wanaagsan oo keliya 3-5 bilood, ka dibna marka lagu kaydiyo qol qabow iyo qoyan.
Ka hor inta beeritaanka tooska ah ee abuurka dhulka, waa in laga xoreeyo qolofka, haddii kale waa inaad sugto waqti dheer biqilka.
Waxa ugu wanaagsan in la beero geedka koolejyada kala duwan oo leh mugga ugu yaraan hal litir ama si toos ah dhulka ugu furan (meel joogto ah).
Sida caadiga ah abuurka ka soo baxaan laga bilaabo Abriil ilaa August, laakiin waxaa jira kiis marka ay bilaabaan in ay Gagaashaa oo kaliya in January, ka dibna joogitaanka dhirta xoog leh geedo isla markiiba u dhintaan.
Si loo kordhiyo biqilka abuurka, waa inaad raacdaa xeerar dhowr ah: ka saar midhaha geedka ee bisha Nofembar, sii miraha qoyan, laakiin ma qoyan (wax aan ka badnayn 2-3 bilood) ilaa laga beerto, iyo ka saar maqaarka ka hor beerashada dhulka.
Waxaa suurtagal ah in la dedejiyo habka biqilka by pre-qallajin abuur ah ee xal daciif ah ee kiniinka potassium for 2-3 maalmood, ka dib markii taas oo pericarp oily ah waa in la nadiifiyaa.
Beerto abuurka ah waa geedi socod fudud oo fudud. Markaad diyaarisid ciidda mid ka mid ah nidaamyada kor ku xusan, waxaad u baahan tahay inaad abuurto abuurka qoto dheer oo ah 1-2 cm oo, ka dib markaad iyaga hagaajiso, qoyso kubad dhoobo ah.
Ka dibna weelka dalagyada leh waxa lagu daboolaa dhalooyinka ama filim caag ah (waa inaysan taaban dhulka) oo lagu meeleeyo meel diiran.
Marka caleemaha koowaad ee "cape" muuqan, waxay nadiif ah oo sii wadaan si ay ula socdaan qoyaanka ciidda, tan iyo xitaa qalajinta yar yar si weyn u yareeyo koritaanka geedo.
Sida ugu dhakhsaha badan dhirta ay leeyihiin labada caleemood ee ugu horeeya, waa in loo rogaa sida ku xusan nidaamka 2 x 2 ee dhulka furan ama dheryo yar oo kala duwan.
Sida loo daryeelo geedo geedo geedo ah
Sida aad arki karto, masruufka sii kordhaya ee abuurka ah ee guriga ku yaal ma aha shaqo adag, laakiin geedo waxay u baahan yihiin daryeel habboon ka hor iyo ka dib biqilka abuur.
Muraayadda ama filimka, oo daboolaya weelka miraha, waa in laga saaro maalin kasta 15-20 daqiiqo. Cabbitaanka iyo haynta qoyaanka si joogto ah uma oggolaan doonto in miraha la qalajiyo, iyo muuqaalka muuqaalka ugu horreeya ee hoyga, ma jiri doonto baahi.
Waqtigaan, waa inaad u wareejisaa dhirta meel aad u iftiimiso (ka dib 30-40 maalmood).
Marka laba ama saddex maalmood oo idil ah, dalagyada waxaa lagu waraabiyaa biyo la dejiyay heerkulka qolka, ka dibna geedo waxay leeyihiin 2-5 caleemo run ah, waxay sameeyaan soo qaado.
Waa muhiim! The taproot of seedling laulel waa dheer oo jilicsan, sidaas darteed, ka hor transplanting, dhirta waxaa loo waraabiyo si weyn (tani jilcisaa ciidda).
Dareemka Laurel: geedo soo qaado
Sida ugu dhakhsaha badan ee abuurka laurelka ayaa dhalatey iyo caleemaha dhabta ah ee ugu horreeyay ayaa u muuqday geedo, waa wakhti ay ka fekeraan sida loo beeray dhul furan ama weel weyn.
Sida substrate for geedo, waxaad isticmaali kartaa isku dar ah oo ah dhul wareeg ah, ciid iyo digada caleenta lagu qasi jiray peat-sare moor. Dheecaan ayaa lagu rakibay hoose ee dheriga ama dheriga (dhuxul yar oo geedo casaan leh loo isticmaali karo), ka dibna isku darka diyaarinta waa la shubay oo geedka laftiisa ayaa la geliyaa.
Qalitaanka ka dib, dhulku wuxuu si fiican u waraabiyaa biyo kala gooni ah, heerkulku waa inuu ahaado 2-3 ° C heerkulka qolka. Sidaa darteed, waxaad ka caawin kartaa badbaadada dhirta si fiican.
Toddobaadyada soo socda, ka fogow qorraxda tooska ah ee geedo, ka dib "karantiin" waxaad si badbaado leh ugu dhejin kartaa muusikada meel wanaagsan oo iftiin leh, taas oo gacan ka geysaneysa kobcinta guusha kale.
Maadaama laeryeelka bacriminta loo isticmaalo macdanta iyo Bacriminta adag ee organic, kuwaas oo lagu dabaqo ciidda bil kasta. Qaabkani wuxuu si gaar ah u khuseeyaa inta lagu jiro xilliga sii kordhaya, inkasta oo aysan habooneyn iyaga in ay ka baxaan dhirta.
Xataa shuruudaha beerta iyo daryeelka, xayawaanka abuurka ayaa si tartiib tartiib ah u koraa, waxana loo baahan yahay in lagu celiyo qiyaastii labadii sanaba hal mar (sida ugu dhakhsaha badan ee xididdadu u buuxsamaan gebi ahaanba dheriga), laakiin haddii aad samayso dulqaad, dadaalkaagu wuu guuleysanayaa oo waad fiicnaan doontaa geedka.